Ama-Nanoparticles weSiliva, i-Copper Nanoparticle, i-Carbon Nanotubes enezindonga eziningi - i-Hongwu
besiziqhenya ukukhiqiza, ukupakisha futhi ukuthengisa Isixazululo sethu uqobo iminyaka eminingi.
Dlulisa amehlo kumaNanomaterialsHAMBA
I-Hongwu ingumnikazi wegunya lokucwaninga ngemikhiqizo emine nentuthuko, isikhungo sokuhlola, i-laboratory yocwaningo esetshenzisiwe kanye nesisekelo sokuhlola umshayeli, egxile kwezentengiselwano ezinhlobonhlobo zama-nanoparticles angaphili nezinto zokwakha zekhulu lama-21 kusukela ngo-2002. Besilokhu sihlola izimakethe , Ukusungula ubuchwepheshe obusha, nokunikeza izixazululo zentuthuko sisebenzisa ubuchwepheshe bethu be-nanomaterials, ezibophezele ekuvuseleleni ukusilela kwezinto zendabuko.
hlola okwethu IMIKHAKHA eyinhloko
Ungakhetha ama-nanomaterial angaphandle kwamashalofu noma uwenze ngokwezifiso zakho ukuze zivumelane nezidingo zakho.
IZIMBALI ZOKWENZA EZIBALULEKILE
IZIMPAWU ZOKWENZA KWEMETALI
Wina ngenxa evelele
talent kanye izinto eziphambili
Umsebenzi kaHongwu: njengomhlinzeki oqeqeshiwe emkhakheni wezinto ezintsha ze-nano ezinensizakalo ehlobene
Inani likaHongwu: ikhwalithi namakhasimende kuqala, athembekile futhi athembekile, insizakalo esezingeni lokuqala.
Ukuphathwa kwefilosofi kaHongwu: ukuphathwa kwe-modular, ukunamathela emakethe, ukuhlangabezana nezidingo ezifanele zamakhasimende njengomthwalo wemfanelo. Gxila kulo mkhakha ngokulima okujulile nokulima ngokucophelela.
lokho thina yenza
Ukunamathela ezimakethe ezigxile emakethe, ezanelisa amakhasimende 'njengezibophezelo zeHongwu, ezigxile embonini, zihlakulela kakhulu, ukuba umphakeli oqeqeshiwe kanye nomhlinzeki wesevisi ohlobene emkhakheni wezinto ezintsha, ngaphezu kokuhlinzeka ngemikhiqizo ejwayelekile, it ingabuye yakhelwe ngokuya ngezidingo ezithile zamakhasimende. Sizoqhubeka nokwenza ngcono ikhwalithi yomkhiqizo namazinga wensizakalo, sikhonze kangcono amakhasimende ethu kusuka ekhaya nakwamanye amazwe, impumelelo yokuphumelela yokuwina.
I-Hongwu inezinto zokukhiqiza ezithuthukile, izinyathelo zenqubo ezithuthukile kanye nesistimu yokulawula ukukhiqiza ephelele. Enqubeni yokukhiqiza, amanani enkampani wonke wekhwalithi yokuqala yokusebenza ayasetshenziswa. Ukuqinisekisa ukuthi imikhiqizo ekhiqizwayo izinze ngokuphelele.
Imodyuli ye-R & D
I-Hongwu ineqembu eliqeqeshiwe le-R & D elenziwe ngabaphenyi abanolwazi lwe-nanotechnology kanye nonjiniyela abaphezulu, abafundi bezobudokotela, kanye noprofesa ekwenziweni kwemikhiqizo emisha. Nge-Hongwu Research Institute kanye namayunivesithi njengokwesekwa kwezobuchwepheshe, silandela eduze isidingo semakethe futhi siqhubeke nokuthuthukisa nokukhiqiza izinto ezintsha.
Ukuze isebenze ngokushelela inkampani iyonke, sineqembu lezokuphepha eliqeqeshiwe futhi eliqeqeshwe kahle, kufaka phakathi ezabasebenzi, ezokuphatha, ezezimali, ezokuthengwa kwempahla, ezokuhanjiswa kwempahla, ezomthetho, ezezimali nezinye izici zokuhlinzeka ngokuvikelwa okuphelele, bonke ozakwabo benkampani bayasebenza ngokuhlanganyela, sisebenze kanzima, iningi lisekelwa amakhasimende asekhaya naphesheya, sihlala sakha ubukhazikhazi obusha.
I-Electromagnetic Wave Absorbent Material
yini yethu Amakhasimende athi
Senze ucwaningo oluningi lokuqhathanisa sathola imiphumela egculisayo. Ngokushesha umnyango wethu wokuthenga uzohlela ama-oda amasha. Sicela usilungiselele impuphu yesiliva engu-8-10kg bese uqinisekisa ukuthi iyafana ne-oda lokugcina. Ngiyabonga
Ifike ngokushesha okukhulu futhi impahla enkulu ongayisebenzisa. Njengamanje siyayihlola ngamaqoqo ethu futhi kuze kube manje isebenza kahle impela nje ngithemba ukuthi izokwengeza ukuvikelwa isikhathi eside. Ingabe lukhona olunye uketshezi noma izimpushana onazo ezincibilikayo ku-oyela / isinyibilikisi / imakhilayoni ezosiza ekuphikiseni amanzi esingawasebenzisa eceleni kwempuphu ye-sio2.
I-nanopowder ye-ZnO yangaphambilini ilingana nesicelo sethu. Futhi sizothola enye i-800kg. Ngicela ungithumelele umnikelo kulokho naku-2000kgs bese ukhombisa isikhathi sokuhola. Ngiyabonga.
Nge-100-200nm Si, i-3kg yokugcina isebenza kahle kuhlelo lwethu lokusebenza. Sithanda ukwenza i-oda lokulingwa lama-20kg ngenyanga ezayo, bese kuthi isinyathelo esilandelayo kube u-100kg. Sicela ukhombise inani lakho elihle kakhulu, futhi nokuhambisa nesikhathi sokuhola esingu-20kg no-100kg, ngiyabonga.
Kuze kube manje ukuhlolwa kwe-Pt nanopowder kuhle, sidinga enye i-10g yokuhlola nokuhlola okwengeziwe kwe-ASAP. Sicela uthumele i-Invoice yeProforma.
I-Industrial application ngamakhasimende, ivumelana nezidingo eziguqukayo. Emashumini amabili edlule, sakha idumela lethu embonini kusuka kumakhasimende ethu ngekhwalithi engaguquguquki nangezixazululo ezinhle kakhulu.